Labels: အင်တာဗျူး2comments
“ကျွန်တော်နှင့်နတ်ဘုရားရုပ်ထု” မှ “မူလကစ၍ မူလသို့ပြန်ရောက်ခြင်း” ဟူသော အဓိပ္ပါယ် ကို ရှင်းလင်းပေးပါခင်ဗျား။
-“တောက်တယ်ကျင်း” လို့ တရုတ်လိုအသံထွက်တဲ့ “တာအိုဝါဒ” ရဲ့အယူအဆပါ။ အနုပညာ(Art) ကို ကျွန်တော်တို့ စတင်လေ့လာခဲ့ကြတယ်ဆိုပါစို့။ ဆန့်ကျင်အနုပညာ
Anti-Art ဆိုတာ ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ခုပို့စ်မော်ဒန်ကာလကိုရောက်တော့
ဗလာပုံစံ(Empty form) သုညဒီဂရီအရေးအသား(Zero Degree Writing) ၊ အနုပညာ
မဟုတ်တဲ့ အနုပညာ(Artless Art) စတာတွေထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အကျယ်ရှင်းရင်
အရမ်းရှည်လျားသွားပါလိမ့်မယ်၊ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် သီးသန့်ရေးပါ့မယ်။
၅၂၈ + ၁ = ? ကိုလည်း ရှင်းလင်းပေးပါခင်ဗျား။
-နောက်ထားတာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုမေးမယ့်အစား ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် ယောက်ကို သွားပြကြည့်ပါလား။ အနုနည်းနဲ့သော်လည်းကောင်း အကြမ်းနည်းနဲ့သော်လည်းကောင်း သူ ပြန်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
+တာရာမင်းဝေအပေါ် ကိုရွှေဘုန်းလူရဲ့ အမြင် နဲ့ ကိုရွှေဘုန်းလူအပေါ် တာရာမင်းဝေရဲ့ အမြင်။
မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်ရသလိုပေါ့။ တူတော့တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “ဘက်” လွဲနေတယ်။
လောကတွင် အဖြူရောင် နှင့် အနက်ရောင်တို့အနက် မည်သည်က ပို၍ တန်ဖိုးရှိပါသလဲ။ အကျိုးအကြောင်းနှင့် ဖြေဆိုပေးပါရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
-ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဖြူလူမည်းပြဿနာကြီးထွားနေတုန်းပါပဲ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ နှလုံးသားဖြူတဲ့သူက လူဖြူ၊ နှလုံးသားမည်းတဲ့လူက လူမည်းလို့ခံယူပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါကလည်း စကားအဖြစ်နဲ့သာပြောရတာပါ။ နှလုံးသားဆိုတာကတော့ တစ်မျိုးထဲပါပဲ။ အနက်ရောင်ကို အဖြူရောင်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ယူဆနေကြတာကလည်း လွဲပါတယ်။ အဖြူရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်က မဖြူခြင်းပါပဲ။
နောက်တစ်ခါ ပြောစရာရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ.. အရောင်အမျိုးမျိုး ခွဲမြင်နေရတာဟာ အလင်းရဲ့လှည့်စားမှုကိုလည်း ကိုယ်ကနားလည်ရမယ်လို့မြင်မိပါတယ်။
အချစ်ဆိုတာကို ဆရာဘယ်လိုနားလည်ပါသလဲ ဆရာရင်ခုန်တတ်ပါသလား။
အချစ်ဆိုတာ မော်ဒန်လို့ ဆရာသတ်မှတ်ထားတာလေးပြောပြပေးပါ။
အချစ်ကို အချစ်လို့ပဲ နားလည်ပါတယ်။ ရင်ခုန်မိလို့ ပဲ နားလည်ပါတယ်။ ရင်ခုန်မိ လို့ မိန်းမရသွားပါတယ်။ မော်ဒန်အမြင်နဲ့ပြော …. ဆိုရင်တော့
အချစ် = အ + ချစ်
အ လို့ ချစ်တယ် လို့ပဲ ဆိုကြပါစို့ ။
မော်ဒန်ကဗျာ၊ဝတ္ထုများကို မည်သို့သော တွေးလုံးများပေါ်မှာမူတည်ပြီး၊ ဘယ်လိုခံစား ရေးသားခဲ့သလဲဆိုတာကို ဆရာ့အနေနဲ့ ဆရာရေးခဲ့သော ကဗျာ၊ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် ဥပမာပေး၍ ရှင်းပြပေးစေလိုပါသည်ခင်ဗျား. .။
-အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးပါပြီ။ “ငါဟာ.. အရက်မူးလာတဲ့ မီးတောက်လေးပါ” တဲ့။ မီးတောက်ဆိုတာနဂိုတည်းက ယိမ်းနွဲ့တတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ အရက်မူးနေတဲ့မီးတောက်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်များ ယိမ်းယိုင်လိုက်မလဲ.. ။ မီးတောက်ဆိုတော့ နဂိုတည်းက ပူပြင်းလောင်မြိုက်ပါတယ်။ အရက်သောက်ထားတော့ ရင်ထဲက ပိုပူပါတယ်။ ဒါပါပဲ။
မော်ဒန်ကဗျာ၊ မော်ဒန်အနုပညာဆိုတာကတော့ ဝေဝါးဖြန့်ကျက်တတ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်ပါတယ်။
ဆရာ့ရဲ့ကဗျာများအပေါ် ဆရာဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက် ဝေဖန်ချက် အပေါ် ဆရာ့ရဲ့အမြင်..။
ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းရန် လို မလို။ နိမိတ်ပုံအယူအဆများကို ရှင်းလင်းပေးရန်။
MODERN ကဗျာတစ်ပုဒ်အား အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုပေးရန် အဓိက ကျ/မကျ ဖြေကြား ပေးစေလိုပါသည်။ အနက်အဓိပ္ပါယ်က အဓိကကျသူလား ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည် ။
မော်ဒန်ကဗျာလို့ သတ်မှတ်တဲ့ စံချိန်စံညွှန်းများရှိပါသလား။ ရှိခဲ့ရင် ဖြေကြားပေးပါရန်။
မော်ဒန်နှင့် ပို့စ်မော်ဒန် ကွာခြားချက်များကိုလည်း ဖြေကြားပေးပါရန်။
“သရုပ်မှန်က မှန်ကန်တဲ့သရုပ်သဏ္ဌာန်အတိုင်း ဖေါ်ကျူးတယ်။”
“မော်ဒန်က မူလအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ အချိုးဖျက် တင်ပြတယ်”
“ပို့စ်မော်ဒန်က ဘာသာစကား စည်းမျဉ်းတွေ ကိုပါချိုးဖျက်တယ်”
“မော်ဒန်ကဗျာတွေ ကို အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။နားလည်ဖို့မဟုတ်ဘဲ ခံစားဖို့သာ ဦးတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရေးသားတင်ပြခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတွေဟာကဗျာရဲ့အနက်အဓိပ္ပါယ် ကိုဖွင့်လိုရင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကဗျာဖတ်သူရဲ့ ခံစားချက်လမ်းကြောင်းကို ဖွင့်တာပါ။” ဒီလောက် ပဲဖြေပါရစေတော့။
+ဆရာတာရာမင်းဝေခင်ဗျား . . . .
မော်ဒန်ပန်းချီတွင် ဗလာနယ်ဧ။် အားသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ဖတ်ရှုဖူးပါသည်။ မော်ဒန်စာပေ (ဝတ္ထု၊ကဗျာ) တွင် “ဗလာနယ်” ဧ။် အားသက်ရောက်ပုံကို ရှင်းလင်းပေးပါရန် ၊ အဆိုပါ “ ဗလာနယ်” ကို မည်သို့သောနေရာများတွင် အသုံးပြုသင့်ပါသလဲ ခင်ဗျား။
-ဘောလုံးကန်ကြသလိုပေါ့ . . .။ကွင်းကအရေးမကြီးဘဲ ဘောလုံးရောက်နေတဲ့နေရာကို Positive Space၊ ဘောလုံးမရောက်တဲ့ နေရာကို Negative Space လို့ ဆိုကြပါစို့။ Positive Space မှာ ဘောလုံးနဲ့အတူ ကစားနေရသူက အရေးကြီးသလို .. Negative Space မှာထဲမှာ ပြေးလွှားနေရာယူနေရသူကလည်း အရေးပါ ပါတယ်။ ဘောလုံးနဲ့အတူ ကစားတတ်ဖို့ လိုသလို၊ ဘောလုံးနဲ့ခွာပြီး ကစားတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဗလာနယ် သီအိုရီ (Blank Theory) နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် ဆောင်းပါးတစ် ပုဒ်ရေးဖူးပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် . . စာမျက်နှာပေါ် မရောက်လိုက်ပါဘူး. . လက်ရေးမူကို ပြန်ရှာတွေ့ရင် ပို့ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ခက်တာက မေးသူအမည်မပါလို့ ခင်ဗျားက ဘယ်သူလဲမသိဘူး။ ဘယ်ကိုပို့ ပေးရမလဲ မသိဘူး။
+“အနုပညာပစ္စည်း ဆိုတာ … နားလည်ဖို့မလို ခံစားရန်အတွက်ဖြစ်တယ်” ဆိုတာကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
-လက်ရှိကျွန်တော်တို့ Post Modern World မှာ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆ ပေါင်းစုံရောယှက်ပြွန်းတီးလျက် ရှိပါတယ်၊ ကမ္ဘာကျော် အနုပညာသမားတစ်ယောက် ကဆိုရင် သစ်ပင်တွေ၊ မော်တော်ကားတွေ ကို ပလတ်စတစ်နဲ့ ပတ်ပြပါတယ်။ နားလည်စရာမလိုပါဘူး။ ခံစားရုံ သက်သက်နဲ့ ရပါတယ်။ တခြားကမ္ဘာကျော် အနုပညာသမားတစ်ယောက် ကတော့ သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ သဲတွေနဲ့ပဲ မြို့တစ်မြို့ကို ထုဆစ်ပြပါတယ်။ လေတိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီသဲပန်းပုဟာ တဖြည်းဖြည်း လွင့်ပါး ပြိုကျသွားပါတယ်။ လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေက မေးမြန်းတဲ့အခါ အဲဒီပြကွက်ရဲ့ အမည်ကို ရောမမြို့တော်ကြီး ပျက်စီးခြင်း လို့ သူက ရွတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါ မျိုးကျတော့လည်း နားလည်မှုရှိမှ ခံစားလို့ရမယ့် ပြကွက်မျိုးပါ။ Multi Reality ကိုလက်ခံထားတဲ့ လက်ရှိခေတ်ကြီးမှာ အနုပညာအယူအဆတွေဟာ မျိုးစုံရှိပါတယ်။ မျိုးစုံကိုလက်ခံပါတယ်။
၁။ ဘယ်လိုစာအုပ်တွေကို ဆရာအဓိက ဖတ်ပါသလဲ။
၂။ မော်ဒန်ကဗျာဧ။် အနှစ်သာရ ၊ ရုပ်လက္ခဏာ မည်သို့ရှိသည်ကို ရှင်းလင်းပေးပါ။
၁။ ဘယ်လိုစာအုပ်ကိုမဆို အဓိကထားဖတ်ပါတယ်။ “စာ” က အဓိကမဟုတ်ဘူး။ ဆင်ခြင် သုံးသပ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဥာဏ်ကသာ အဓိကပါ။
၂။ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေမယ်ဆိုရင် အရမ်းရှည်လျားသွားပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာကျော် ကချေသည် တစ်ယောက်ကို ဂျာနယ်လစ် တစ်ယောက်က “ဒီကကွက်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ” လို့မေးခဲ့ တာကို ကချေသည် က ပြန်ဖြေပါတယ်။ “အဲဒီလိုသာ ပါးစမ်းနဲ့ အလွယ်တကူပြောလို့ရရင် ကျွန်မတို့ အပင်ပန်းခံပြီး ဘယ် က နေမလဲ” တဲ့။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကျွန်တော့် သဘောထားကလည်း အဲဒီအတိုင်းပါပဲ။ လက်လွတ်စပယ် ဖြေဆိုတယ်လို့ မထင်ရင် အရမ်း ကျေးဇူးတင်မှာပါ။
“ရသစာပေဧ။်နိဒါန်း” တွင် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်စဉ်သည် ဟာသရသကိုပေးနိုင်ပါသည်ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။ “ထော်လန်ကန့်လန့်” များသည် ဟာသရသ နှင့်မည်သို့ကွာခြားပါသလဲခင် ဗျာ။ “လှေကိုမလှော်၊ပင်လယ်ကိုလှော်မည်” ဟူသော ဆရာဧ။်စာသည် “ထော်လော်ကန့်လန့်” ဖြစ်သော်လည်း ဟာသရသ ကိုမပေးပါ။
၁။ “လှေကိုမလှော်၊ ပင်လယ်ကိုလှော်မည်” ဟူသောစကားလုံးသည် ဟာသရသဆီသို့ ဦးတည်သော အလင်္ကာမဟုတ်ပါ။ Modern Sensibility အရ ရေးထားသော အဖွဲ့အနွဲ့ တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
၂။ ပထမ မေးမြန်းချက်သည် ဆရာဇော်ဂျီ ရေးသားသော “ရသစာပေဧ။်နိဒါန်း” စာအုပ် နှင့် ပတ်သတ်နေပါသည်။ လက်ခံနိုင်စရာများရှိသလို၊ တွေဝေနိုင်စရာများလည်းရှိနေပါသည်။ တစ်နေ့နေ့မှာ ကျမ်းတစ်စောင်စောင်ပြု၍ ပြောသင့်လျှင်ပြောပါမည်။ ဤနေရာမှာတော့ အကျယ် မရှင်းသာပါ။
၃။ “ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်စဉ် သည် ဟာသရသကို ပေးနိုင်ပါသည်” ဟူသောအဆိုကို ကျွန်တော့် အနေနှင့် လက်မခံပါ။ “အကြွင်းမဲ့” ဆိုလျှင်လက်မခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၄။ ထော်လော်ကန့်လန့်တွေးမှုအားလုံးသည် လည်း ဟာသရသကိုမပေးစွမ်းနိုင်ပါ။ ဒီဘိုးနိုး ပေးဖူးသော ဥပမာတစ်ခုရှိပါသည်။ “ဘတ်(စ်) ကားပေါ်မှာ ခုံတွေဖြုတ်လိုက်လျှင်ဘယ်လိုဖြစ်မည်နည်း” ၊ “ကားပေါ်မှာ လူပိုဆန့်မည် ။ ခုံလုထိုင်သောပြဿနာတွေ၊ယောင်္ကျားတွေက မိန်းမကို ဦးစားပေးရသော ပြဿနာတွေ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိပြေလည်သွားနိုင်သည်” သို့သော် ထိုအတွေးသည် ဟာသရသနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
၅။ အတွေးသည် အတွေးဖြစ်ပါသည်။ ရသသည် ရသဖြစ်ပါသည်။